Umzi-mveliso weSixhobo soVavanyo lwe-IDM-i-IDM yaseTshayina abavelisi besixhobo soVavanyo lwe-IDM, ababoneleli
I-DRK-GHP ye-Electrothermal Cons...
A0002 Digital Air Permeability Tester
Umgaqo wokulinganisa wesi sixhobo kukuba ukuhamba komoya kudlula kwindawo ethile yelaphu, kwaye isantya sokuhamba komoya sinokuhlengahlengiswa ngokwamalaphu ahlukeneyo, de kube umahluko woxinzelelo phakathi kwamalaphu amabini angaphambili nangasemva.
Ukuvavanya uvavanyo lokuguga kombala wempahla phantsi kweemeko ezithile zokukhanya
Ngethuba lovavanyo, isampuli igxininiswe kwi-plate yesampuli, kunye nentloko yokuvavanya ububanzi be-16mm isetyenziselwa ukuxubha emva nangaphandle ukujonga ukukhawuleza kwesampuli phantsi kokuxutywa okomileyo / okumanzi.
Esi sixhobo sisetyenziselwa ukuvavanya ukulahleka kobunzima bempahla ebekwe phantsi phantsi kwemithwalo eguquguqukayo.Ngexesha lovavanyo, iinyawo ezimbini zokucinezela kwisixhobo zicinezela phantsi, ukuze isampuli ebekwe kwisampulu igxininiswe ngokuqhubekayo.
H0003 Textile Remotter Tester
Ngethuba lovavanyo, uxinzelelo lwamanzi lwanda ngokuthe ngcembe kwelinye icala lesampuli.Ngeemfuno zomgangatho wovavanyo, ukungena kufuneka kwenzeke kwiindawo ezintathu ezahlukeneyo, kwaye idatha yoxinzelelo lwamanzi ngeli xesha kufuneka irekhodwe.
G0005 iDry Flocculation Tester
I-G0005 umvavanyi owomileyo we-lint usekwe kwindlela ye-ISO9073-10 yokuvavanya ubungakanani benkunkuma yefayibha yamalaphu angalukwanga kwimeko eyomileyo.Ingasetyenziselwa imifuniselo yeflocculation eyomileyo kumalaphu akrwada angalukwanga kunye nezinye izinto ezilukiweyo.